Mampatsiahy ny mpampiasa i Apple fa efa hifarana ny fotoana malalaka an'ny Apple TV + Avy amin'ny mac aho
Nandritra ny andro maromaro dia nandefa mailaka tamin'ny mpampiasa rehetra izay mbola mampiasa ny fotoam-pitsarana nomen'i Apple tamin'ny fotoana nanombohana ny sehatry ny horonantsary streaming azy, dia nitatra indroa ny fotoam-pitsarana ary nifarana tamin'ny Jolay.
Manantena ny hanombohana amin'ny volana Jolay ny Apple noho ny fanantenana fa hisy olona hanavao bebe kokoa ary tsy hanafoana ny fisoratana anarana premieres maro be toy ny vanim-potoana faharoa an'ny Ted lasso, The Morning Show y JEREO. Ho fanampin'izay, andrasana amin'ny volana septambra ny andiany premiere. fototra (mifototra amin'ny tantara nosoratan'i Isaac Asimov) sy ​​ny fiverenan'i Jon Stewart amin'ny fahitalavitra.
Ao amin'ny mailaka nalefanao ho an'ireo mpampiasa izay mbola mankafy ny fotoana malalaka, Apple mampatsiahy anao ireo pitch rehetra ireo, amin'ny hetsika iray izay toa fitsapana litmus hahita ny fahatokisan'ireo mpampiasa izay nankafy ny Apple TV + maimaimpoana hatreto.
Ity fitsapana litmus ity dia hampiharihary amin'i Apple raha ny fanolorantenany handefa horonantsary mbola maitso na nanomboka masaka, na eo aza ny zava-misy fa ny atiny misy ny katalaogy misy dia mitohy tsy misy, satria ny katalaoginy manokana dia misy fandaharana amin'ny fahitalavitra 87 sy sarimihetsika no hany fotony.
Ny filokana amin'ny sarimihetsika misy teti-bola be dia be toa ny filohan'i Apple, filokana izay mofo ho an'ny anio ary noana rahampitso. Raha ny tena manokana dia mbola mieritreritra aho fa raha mbola tsy mahazo fifanarahana amin'ny orinasan'ny famokarana hananana katalaogim-bola hisafidianana aho rehefa efa hita na tsy mahaliana ireo lohateny vaovao nampidirina tao anaty katalaogy dia ilaina izany. .
Apple mbola tsy namoaka tarehimarika ho an'ny mpanjifa Apple TV +, amin'ny ampahany satria ny ankamaroan'izy ireo dia tsy tena mandoa ny sarany mifanentana aminy, fa manararaotra ny fanomezana nomen'i Apple azy, noho izany dia tsy azo isaina ho mpanjifa mahazatra izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Mampatsiahy ny mpampiasa i Apple fa efa hifarana ny fotoana tsy andoavan'ny Apple TV +
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny Linux Kernel 5.13 miaraka amin'ny fanohanan'ny Apple Silicon
Mbola miahiahy momba ny "maha-zava-doza" ny AirTags ny aostraliana